ओलीको दाबी : ‘महाधिवेशनमा नेपालका सवारीले बोक्नसक्ने जति मान्छे आउछन्’ « News24 : Premium News Channel
ओलीको दाबी : ‘महाधिवेशनमा नेपालका सवारीले बोक्नसक्ने जति मान्छे आउछन्’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १०औं महाधिवेशनमा नेपालका सवारीले बोक्नसक्ने जति मान्छे आउने बताएका छन् । मंगलबार (आज) काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले साधारण पार्टीहरुले गर्ने जस्तै महाधिवेशन भएतापनि नेपालका सवारीले बोक्नसक्ने जति मान्छे आउने दाबी गरेका हुन् ।
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा २ सत्र हुने र बन्द सत्रमा नेतृत्व चयनको काम हुने बताए । त्यसपछि विधान महाधिवेशनबाट पारित गरिएको देश बनाउने नीति कार्यन्वयनका लागि कस्तो नेतृत्व निर्माण गर्ने ? भन्ने कुरामा अर्को सत्र केन्द्रित हुने उनले बताए ।
यसका साथै अध्याक्ष ओलीले आफूले अध्यक्ष पदमा उठ्ने/नउठ्ने टुंगो गरिनसकेको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले अहिलेसम्म उठ्ने÷नउठ्ने टुंगो गरिसकेको छैन । मैले उठ्ने निर्णय गरेँ भने मलाई सर्वसम्मत छोड्न पनि पाइन्छ । नभए उठ्न पनि पाइन्छ । मैले कसैलाई नउठ भन्ने कुरा हुँदैन ।’
त्यस्तै भीम रावलको उम्मेदवारीबारे आफूलाई चुनौती दिएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘मलाई भीम रावलले चुनौती दिनुभएको होइन, सुझाव दिनुभएको हो । आदर, सम्मान, माया, स्नेह देखाउनुभएको छ । बढी खट्नुभएको छ, थकाइ लाग्या होला आराम गर्नुहुन्छ कि! म उठ्छु भन्नुभएको हो ।’